China intsholongwane intsholongwane isampulu ityhubhu mveliso kunye nabenzi | Limeng
Injongo kunye nenkcazo yekiti yesampulu yentsholongwane
1. Isetyenziselwa ukuqokelela kunye nokuhambisa umkhuhlane weklinikhi, umkhuhlane weentaka (njenge-H7N9), intsholongwane yonyawo lwenyawo, imasisi kunye nezinye iisampulu zentsholongwane kunye ne-mycoplasma, ureaplasma kunye ne-chlamydia specimens
2. Intsholongwane kunye neesampulu ezinxulumene nayo zigcinwa kwaye zihanjiswe kwisithuba seeyure ezingama-48 zikwimeko efrijiweyo (2-8 degrees).
I-3.Virus kunye neesampulu ezinxulumene nayo ezigcinwe kwi -80 degrees okanye kwi-nitrogen engamanzi ixesha elide.
A) Ukuba iisampulu eziqokelelweyo zisetyenziselwa ukufumanisa i-virus ye-acidic, iikiti ze-asidi ze-nucleic acid kunye ne-acidic detection reagents ziya kusetyenziswa; ukuba isetyenziselwe ukwahlula intsholongwane, kufuneka kusetyenziswe inkcubeko yeseli.
B) Iinkalo ezahlukeneyo zesicelo zineemfuno ezahlukeneyo kwimali yokulayisha ulwelo lwesampulu. Nceda ukhethe imveliso efanelekileyo ngokwemiyalelo kulwazi loku-odola:
Kwintsholongwane yesampulu yesampulu yokuqokelela iisampulu zentsholongwane kwizigulana zeklinikhi, inani lolwelo olufunekayo ngokubanzi yi-3.5ml okanye 5ml.
Ukuqokelela isampulu yetyhubhu yokuqokelela kunye nokuthuthwa kwexesha elifutshane kwintsholongwane yomkhuhlane wentsholongwane kwindalo yangaphandle, isixa samanzi esifunekayo yi-5mL okanye i-6ml.
Igama lemveliso: Intsholongwane
Ubungakanani: 18mm * 100mm 50 / ibhokisi abantu babandakanya ityhubhu * 1, tshintsha * 1.
Iintsholongwane isampulu ityhubhu amacandelo eziphambili:
Isiseko se-Hank se-liquid, i-gentamicin, i-antibiotics ye-fungal, i-BSA (V), i-cryoprotectants, i-biological buffers kunye ne-amino acid.
Ngokwesiseko se-Hank, ukongeza i-BSA (iqela lesihlanu le-BOVINE serum albumin), i-HEPES kunye nezinye izinto ezinzileyo zentsholongwane zinokugcina umsebenzi wentsholongwane kuluhlu olubanzi lobushushu, ukunciphisa ukubola kwentsholongwane, kunye nokuphucula izinga elifanelekileyo lokwahlulwa kwintsholongwane.
Ukusetyenziswa kweKhompyuter yeSampling Kit
1. Phambi kwesampulu, phawula ulwazi olufanelekileyo lwesampuli kwileyibhile yetyhubhu yesampulu.
2. Ngokweemfuno zeesampulu ezohlukeneyo, iswabi isetyenziselwa ukwenza isampulu kwindawo ehambelana nayo.
3. Ngokukhawuleza faka i-swab kwi-tube yeesampuli.
4. Yaphula isahlulo seswefu ngaphezulu kwesampulu yesampulu uze uqinise isiciko setyhubhu.
5. Iimpawu ezisandula kuqokelelwa zeklinikhi kufuneka zisiwe elabhoratri zingaphelanga iiyure ezingama-48 nge-4 ° C, kwaye ezo zisilelayo ukuhanjiswa elebhu ngaphakathi kweeyure ezingama-48 kufuneka zigcinwe -70 ° C okanye ngaphantsi. Iimpawu kufuneka zifakwe isitofu kwaye zahlulwe ngokukhawuleza emva kokuba zithunyelwe elebhu. Ezo zinokufakwa isitofu kwaye zahlulwe kwiiyure ezingama-48 zingagcinwa nge-4 I. kufuneka igcinwe kwi -70 ℃ okanye ngezantsi.
I-swab ye-Pharyngeal: Sula zombini i-pharyngeal tonsil kunye nodonga lwangasemva lwe-pharyngeal nge-swab, uphinde uphinde ungene entlokweni yesisombululo kwisampulu, kwaye ususe umsila. (Ilungele isampulu nale mveliso)
Egqithileyo Ibhendi ye-earloop elahlwayo
Isampuli Tube engenanto
Banokubulawa ezingenanto Tube
Ezilahlwayo Sampling Tube
Ityhubhu yeZonyango engenanto
Isampuli Tube Tube